राजेन्द्र लिङदेन भन्नुहुन्छ – कांग्रेस, एमाले र माओवादीले देश बनाउँछु भन्नु र गोरु ब्याउँछ भन्नु एउटै !
काठमाडौं : राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेनले आगामी निर्वाचनमा कांग्रेस, एमाले र माओवादीलाई भोट दिएमा देश बर्बाद हुने बताएका छन्।
बिहीबार गोरखा सदरमुकाममा आयोजित राप्रपाको आमसभालाई सम्बोधन गर्दै उनले उक्त पार्टीहरूलाई भोट दिएर विगतमा गरेको गल्ती नदोहोर्‍याउन आग्रह गरेका छन्।
‘३१ वर्षदेखि केही सीमित राजनीतिक दल र तिनका सीमित नेताको चक्रव्यूहमा देशसँगै हामी पनि फसेका छौं,” उनले भने, “अबको चुनावमा पनि त्यही दलहरूलाई भोट दिने हो भने हामी बर्बाद हुने मात्र होइन हाम्रो भावी सन्ततिको भविष्य पनि बर्बाद हुन्छ।”
कांग्रेस, एमाले र माओवादीले चुनाव जितेर देश बनाउछु भन्नु साँढेको टाङमुनी बाल्टी थाप्नु जस्तै भएको लिङ्देनले टिप्पणी गरे। ‘साढेको टाङमुनि बाल्टी थापेर दूध आउँछ ? साँढेले दूध दिएन भनेर त्यसलाई सुम्सुम्याउँदा हुन्छ ?
खान पुगेन भनेर दाना थपिदिँदाँ दूध आउछ ? साढेँको धर्म नै दूध दिने होइन कसरी आउछरु त्यसैले ठूला भनिने दललाई भोट दिएर देश बन्छ भन्नु पनि त्यस्तै हो,” उनले भने।
ठूला भनिएका राजनीतिक पार्टीले देशलाई भीख माग्ने बनाएको भन्दै उनले एमसीसी पास गर्नु गलत भएको तर्क पनि गरे।
सभामा राप्रपाका केन्द्रीय उपाध्यक्ष हेमजङ गुरुङ, महामन्त्री कुन्ती कुमारी शाही, प्रवक्ता मोहन श्रेष्ठ र ज्ञानेन्द्र शाही, केन्द्रीय सदस्य रेखा थापा, प्रवास आइसीसी संयोजक प्रेमकुमार श्रेष्ठ, केन्द्रीय सदस्यहरू रामराजा कोइराला, लोकनाथ तिवारी लगायतले सम्बोधन गरेका थिए। -दैनिक न्युज नेपाल मा समाचार छ ।
२०७८ चैत्र ११, शुक्रबार प्रकाशित 1 Minute 126 Views
सलमान खान नआउने भएपछि महावीर पुनको व्यंग्य – म युरोपबाट नेपाल आउँदैछु ।